२४ दिन पछि कोरोना जितेर फर्किए धनकुटाका सांसद दम्पती ! – Complete Nepali News Portal
२४ दिन पछि कोरोना जितेर फर्किए धनकुटाका सांसद दम्पती !
धनकुटा खबर । धनकुटाकी प्रदेश समानुपातिक सभासद् कुसुम कुमारी श्रेष्ठ र उनका पती कोरोना मुक्त भएर फर्किएका छन् ।
२४ दिनको आइसुलेसन बसाई पछि संसद श्रेष्ठ र उनका पति कोरोना मुक्त भएका हुन् । संसद दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भए पछि उनिहरुको संम्पर्कमा आएकाहरुको कन्टाक ट्रेसिग गर्दा अन्यमा भने कोरोना देखिएको थिएन ।